जलविद्युतकाे सेयरमा निराशा - UrjaKhabar
श्रावण ०१, २०७६ 1801 लेख
सेयर लगानीकर्ताका लागि यो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ खासै फापेन । लगानीकर्ताको संख्यामा वृद्धि भए पनि समयको गतिलाई समाउन नसक्दा लगानीकर्ता कहिले आन्दोलन त कहिले अनसन बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । यो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को शुरू दिन अर्थात् साउन १ गते १२१२ दशमलव ३६ बाट खुला भएको बजार सोही दिन १२०४ दशमलव ३१ मा झरेको थियो । दिन प्रतिदिन सेयरबजार ओरालो लाग्दा लगानीकर्ता निकै निराश भएका छन् । खास गरी जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण निकै घटेको छ । यद्यपि सेयरबजार उकालो लाग्नु र ओरालो लाग्नु भने स्वाभाविक हो ।
यो आर्थिक वर्षको अन्तिम तथ्यांक अनुसार हालसम्म १५ लाखभन्दा बढीले डिम्याट खाता खोलेका छन् । तर पनि आईपीओ भर्नेको संख्या भने लगभग ४ लाखको हाराहारी मात्र छ । दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्नेको संख्या त अझ कम छ । यसले के देखाउँछ भने डिम्याट खाता खोल्दैमा सेयरबजारमा लगानीकर्ता बढे भनेर खुशी भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सेयरबजारका बारेमा ज्ञानको कमी हुन वा खासै चासो नराख्नु वा लहैलहैको भरमा खाता खोल्नु नै क्रियाशील नहुनुका कारण हुन सक्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा साना तथा ठूला गरी २७ ओटा संस्थाले धितोपत्रबोर्डबाट आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति पाए । आठओटा कम्पनी अहिले पनि पाइपलाइनमा रहेका छन् । ठूला कम्पनीमा अपर तामाकोशी र शिभम् सिमेन्टले शेयर जारी गरे । जलविद्युत्का क्षेत्रमा अपर तामाकोशीले शेयरबजारमा अझै राम्रो भाउ पाइरहेको छ । तर, धेरै जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर आईपीओको मूल्यभन्दा पनि तल झरिसकेको छ । मुनाफा दिने गरेका कम्पनीको मूल्य समेत अंकित मूल्यभन्दा कममा विक्री भइरहेको छ ।
नेपालको विकासका लागि जलविद्युत्को विकास गर्न जरुरी छ । त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रको विकासका लागि नयाँनयाँ नीति लिइरहेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको विरोधमा स्थानीय जनता उत्रन्थे । तर, अहिले उनीहरूलाई सेयर दिन थालेपछि त्यसमा कमी आएको छ । पछिल्लो समयमा भने जलविद्युत्मा लगानी गरेका स्थानीयहरू निराश बनेका छन् । सय रुपैयाँमा किनेको सेयर लकिङ पिरियड पनि समाप्त नहुँदा दोस्रो बजारमा सय रुपैयाँभन्दा कममा विक्री भइरहेका छन् । अझ कतिपय लगानीकर्ता त आइपीओ किन्नुभन्दा दोस्रो बजारमा सेयर किन्नु फाइदा छ भन्न थालेका छन् । हुन पनि बजारमा अंकित मूल्यभन्दा थोरैमा थुप्रै कम्पनीका शेयर किन्न पाइन्छ ।
जनतालाई सेयरबेचेर जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसैले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नाराका साथ जलविद्युत्को शेयर जारी गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जम्मा १४ ओटा जलविद्युत् कम्पनीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएर बजार प्रवेश गरे तापनि आधाजति कम्पनीको अवस्था दयनीय छ ।
अंकित मूल्यभन्दा पनि धेरै कम मूल्यमा दोस्रो बजारमा कारोबार हुनु भनेको सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी डुब्नु हो । यस क्षेत्रबाट भोलिको दिनमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । किन जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरू अपेक्षा गरे अनुसार प्रगति गर्न सकेनन । के नियमन निकाय नभएर हो ? यस्ता कम्पनीलाई धित्रोपत्र बोर्डले किन आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दियो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
जलविद्युत क्षेत्रमा नियामक निकाय नभएकाले आयोजनाहरूले हरहिसाब चुस्त भएन, साधारणसभा बसेन । अहिले जलविद्युत् नियमन आयोग गठन भएको छ । यसले यस क्षेत्रमा भएका केही विकृति रोक्ने अपेक्षा त छ तर पनि बजारमा जलविद्युत् कम्पनीको मूल्य घट्ने क्रम रोकिएको छैन । कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न यस नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खासगरी जथाभावी हकप्रदको भारी बोकाएर लगानीकर्तालाई लाभांश नदिने कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न यस्तो व्यवस्था जरुरी थियो ।
कुनै बेला जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ खुल्दा कैयौं गुणा बढी आवेदन पर्थ्यो । तर, अचेल सेयर विक्री नभएर आईपीको म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तै क्रम जारी रहे भोलि जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूको सेयर विक्री नै नहोला भन्न सकिँदैन । जलविद्युत् कम्पनीहरूमा लगानी गरेर तत्काल लाभांश पाइँदैन । जलविद्युत्मा गरिएको लगानी भनेको दीर्घकालीन हो । यो तथ्य थाहा नपाएका लगानीकर्ता आत्तिएर अंकित मूल्यभन्दा पनि कममा शेयर बेचिरहेका छन् । त्यसैले जलविद्युत्को शेयरको अवस्थाबारे लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी दिनु पनि आवश्यक देखिन्छ ।
बुटवल पावर कम्पनी, चिलिमेजस्ता केही कम्पनीको सेयर मूल्य भने दोस्रो बजारमा राम्रो छ । शुरूका दिनमा जलविद्युत् कम्पनी भनेका चिलिमेजस्तै हुन्छन् भन्ने सोच थियो । तर धेरै कम्पनीले लाभांश दिन सकेका छैनन् । त्यसमा विभिन्न कारण भए पनि सञ्चालकहरूको बेइमानी पनि एउटा कारण हो । समयमा साधारणसभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने तथा हिसाबकिताब पारदर्शी नहुने जस्ता कारणले लगानीकर्ता जलविद्युत्को सेयरतर्फ आकर्षित नभएका हुन् ।
नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारालाई सार्थक र सफल बनाउन कम्पनीहरूलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । यसो भएमा जलविद्युत्को सेयरमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । जलविद्युत् आयोजना निकै महँगो हुन्छ । प्रतिफल पाउन पनि निकै वर्ष कुर्नुपर्छ । यस्तोमा जलविद्युत्का विकास मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत् कम्पनीको सेयरप्रति सर्वसाधारण आकर्षित हुनुपर्छ । सेयरबजार भनेकै छरिएर रहेको पूँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादनमूलक कार्यका लगाउनु हो । जलविद्युत्को विकासका लागि नेपालीको पैस सेयरबजारबाट उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले जलविद्युत्का सेयरमा आकर्षण बढाउन सरकारले थप नीति तय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
लेखक कोशी कलेज, विराटनगरमा प्राध्यापन गर्छन् ।